Moments leh saaxiibo 56
Waa maxay cudurka iyo nooca xiriirku leeyahay bakteeriyadu?
Cudur ka mid ah jirku waa xaalad dastuur ee unugyada unugyada hal ama dhowr xubnood oo jidhka ah aan caadi ahayn sida shaybaarka ah ee shaqaynta xubnaha ama xubnaha uu daciif yahay ama shaqada hal unug ayaa laga saaraa caadi xidhiidhka kale ama hay'adaha kale. Natiijadu waxay tahay in dabeecadaha dabiiciga ahi aysan ku xirnayn xiriir la leh asaasiga aadanaha-taas oo ah, iyadoo la raacayo mabda'a, qaabka qaab-dhismeed ee jirka.
Cudurku wuxuu keenaa cunid aan habooneyn, cabbitaanka, neefsashada, ficil ahaan iyo feker aan habooneyn. Cudurku waa xayiraad ku shaqaynta caadiga ah ee aasaasiga ah kaas oo ka kooban kana shaqeeya xubnaha jidhka.
Bakteeriyadu waa fungi, dhirta microscopic, inta badan waxay u egtahay rodol, lance-like, qaababka xargaha. Bakteeriyadu waxa la sheegay inay sabab u yihiin cudurrada faafa ee badan iyo cudurada aan faafin, cudurada dastuurka.
Inkastoo bakteeriyadu ay leedahay wax badan oo la sameeyo cudurrada, bakteeriyadu maaha sababaha cudurka. Bakteeriyadu waxay horumarisaa sida ugu dhakhsaha badan ee shuruudaha loogu talagalay iskudhalkooda, iyo xaaladahaas waxaa keena feker aan habooneyn, dhaqdhaqaaqa, neefsashada, cunista iyo cabitaanka. Bakteeriyada tiro ahaan ku filan inay soo saarto cudurku ma jiri karo halka uusan ninna u soo saarin dhul bacrin ah oo ay u fidinayaan jirkiisa. Guud ahaan, si isku mid ah, isku dhafka iyo halsano ee nidaamyada dheef-shiidka iyo dheef-shiid kiimikaadka ayaa ah sababaha asaasiga ah ee soo saara xaaladaha ay bakteeriyadu u hesho hanti iyo horumarin wanaagsan.
Waa maxay kansarka waana la daaweyn karaa, haddii la daaweyn karo, waa maxay daaweynta?
Kansarka waa magaca la siiyay kobaca cusub ee kansarka cusub ee jidhka bini'aadamka, kaas oo ka soo baxa kharashka nudaha caadiga ah ee ku hareereysan, oo caadi ahaan cadeeyo dhimasho. Kansarka waa mid ka mid ah cudurrada ku jira kororka leh horumarka ilbaxnimada. Dhaqan-darradu waxay dhalisaa cudurrada, iyadoon loo eegin tallaabooyinka ka hortagga iyo daaweynta daaweyneed kuwaas oo hoos u dhigaya qaababka cudurka ee horay u jiray. Qofka ugu dhow nolosha nolosha aadanaha waa xayawaanka iyo qaabka dabiiciga ah ee noolaanshaha ay yar yihiin cudurada; laakiin kan sarreysa ee jidhka iyo kuwa fogba laga saaro shuruudaha fudud, waxay u nugul yahiin inay noqoto cudurro. Waqtiga hore, qaababka cudurka ayaa horey u soo kordhay taas oo aan la garanayn, iyo cudurada mararka qaarkood noqda kuwo soo noqnoqonaya. Horumarka maskaxda oo sii kordhaya ayaa u nugul cudurku jidhku wuxuu ku jiraa xaalad jireed ama mid jireed. Dhamaadka sagaashamaadkii qarnigii ugu dambeeyay cudur cusub, oo loo yaqaano sida la qabadsiiyay, muuqaalkiisa oo muuqaalkeedu aad u faafay qaybo badan oo ka mid ah qeybta jilicsan ee adduunka. Sidoo kale xaaladaha kansarka ayaa la sheegay inay kor u kacayaan.
Waxaa jira unug kaankaro ah oo jirka ah. Waxaa jira dad badan oo ka mid ah bani'aadam kasta, laakiin badanaaba waa la horumariyaa, sidaas awgeedna waxay ku sii jirayaan. Waxaa jira dheeraad ah jeermiga kansarka, taas oo ah mid aan muuqaal ahayn, laakiin waa astaan. Jeermigu wuxuu caadi ahaan ku jiraa jirka jirkiisa, laakiin waa qarsoon; taas oo ah, ma keenayso horumarinta unugyada kansarka. Xaaladaha qaarkood ayaa looga baahan yahay hawsha iyo isku dhufashada jeermiska kansarka. Laba ka mid ah xaaladahan inta badan ee caddayntu waa xaalad jireed jireed oo baaluqsan, oo ah dabeecad da'diisu tahay afartan sano iyo wixii ka sarreeya, iyo xaalad maskaxeed oo sida ugu wanaagsan ku muujisa cabsida. Sidaa darteed, cabsida iyo da'da qiyaastii afartan raali-gelin waxay soo saartaa soo saarka jeermiska kansarka iyo sidaas darteed horumarinta iyo isku dhufashada unugyada kansarka.
Kansarka waa la daaweyn karaa waana la daaweyn karaa. Jawaabta su'aashaan iyo daaweynta kansarka ayaa lagu soo koobay "Moments with Friends" oo ku saabsan arrinta WORD, September, 1910, Vol. XI, No.6.